Kunabantu abaningi abakholwa ukuthi naphezu kokuba iBhayibheli libhalwe abantu, onke angamazwi abuya kuMoya oNgcwele nokuthi angamazwi kaNkulunkulu. Ingabe lokho kuqondile? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Namhlanje, abantu bakholwa ukuthi iBhayibheli nguNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu iBhayibheli. Futhi, bayakholelwa ukuthi wonke amazwi aseBhayibhelini yiwo wodwa amazwi uNkulunkulu awakhuluma, futhi nokuthi wonke ashiwo nguNkulunkulu. Labo abakholwa kuNkulunkulu bacabanga ngisho ukuthi nakuba zonke izincwadi ezingama-66 zeTestamente Elidala neTestamente Elisha zabhalwa ngabantu, zonke zanikezwa ngokuphefumulelwa nguNkulunkulu futhi zabe zingumbhalo wamazwi oMoya oNgcwele. Lokhu kuyincazelo eyiphutha yabantu, futhi ayivumelani namaqiniso. Empeleni, ngaphandle kwezincwadi zokuphrofetha, iningi lokubhalwe eBhayibhelini lingumlando nje. Ezinye zezincwadi zeTestamente Elisha zivela kulokho abantu abadlule kukho mathupha, futhi ezinye zivela ekukhanyiselweni nguMoya oNgcwele; izincwadi zikaPawulu, isibonelo, zavela emsebenzini womuntu, zabe zingumphumela wokukhanyiselwa nguMoya oNgcwele, futhi zabe zibhalelwe amabandla, zingamazwi okuyala nokukhuthaza abazalwane emabandleni. Kwabe kungewona amazwi ayekhulunywe nguMoya oNgcwele—uPawulu wayengeke akhulumele uMoya oNgcwele, futhi wabe engeyena umprofethi, kungasaphathwa okokubona imibono. Izincwadi zakhe zazibhalelwe amabandla ase-Efesu, eFiladelfiya, eGalathiya, kanye namanye amabandla. Ngakho, izincwadi zikaPawulu zeTestamente Elisha zabe ziyizincwadi uPawulu azibhalela amabandla, hhayi ukuphefumulelwa okuvela eMoyeni oNgcwele, futhi aziwona amazwi avela ngqo eMoyeni oNgcwele. Zimane zingamazwi okuyala, okududuza, nokukhuthaza awabhalela amabandla ngesikhathi enza umsebenzi wakhe. Ngakho nazo, zingumbhalo womsebenzi omningi kaPawulu ngaleso sikhathi. Zazibhalelwe bonke abazalwane eNkosini, futhi zabe zingezokwenza ukuthi abazalwane emabandleni ngaleso sikhathi ukuba balandele izeluleko zakhe nokuthi bagcine zonke izindlela zeNkosi uJesu. Akazange uPawulu athi, noma kumabandla angaleso sikhathi noma angesikhathi esizayo, bonke kufanele badle futhi baphuze izinto kuye, futhi akazange athi wonke amazwi akhe avele kuNkulunkulu. Ngokuhambisana nezimo ebandleni ngaleso sikhathi, wamane waxoxisana nabazalwane, futhi wabayala, wagqugquzela ukholo kubo; futhi wayemane ashumayele noma akhumbuze abantu futhi abayale. Amazwi akhe ayesukela emthwalweni wakhe, futhi wayesekela abantu ngala mazwi. Wenza umsebenzi womphostoli wamabandla angaleso sikhathi, wabe engumsebenzi owasetshenziswa yiNkosi uJesu, ngakho wanikwa umthwalo wokuphatha amabandla, wathunywa ukuba enze umsebenzi wamabandla, kwadingeka ukuba afunde ngezimo ababekuzo abazalwane—futhi ngenxa yalokhu, wabhalela izincwadi bonke abazalwane eNkosini. Konke akusho okwabe kwakha futhi kukuhle kubantu kwakulungile, kodwa kwabe kungamele amazwi oMoya oNgcwele, futhi wayengeke amele uNkulunkulu. Kungukuqonda okuyiphutha ngokumangalisayo, nokuhlambalaza okukhulu kakhulu, ukuthi abantu bathathe imibhalo yalokho umuntu adlule kukho nezincwadi zomuntu njengamazwi akhulunywa nguMoya oNgcwele emabandleni! Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuza ezincwadini lezi uPawulu azibhalela amabandla, ngoba izincwadi zakhe zazibhalelwe abazalwane ngokubhekelela izinselelo nezimo zebandla nebandla ngaleso sikhathi, futhi kwabe kungezokuyala abazalwane eNkosini, ukuze bathole umusa weNkosi uJesu. Izincwadi zakhe kwakungezokuvuselela abazalwane bangaleso sikhathi. Kungashiwo ukuthi lokhu kwabe kungumthwalo wakhe, futhi kwakungumthwalo ayewunikwe nguMoya oNgcwele; phela wabe engumphostoli ehola amabandla ngaleso sikhathi, owabhalela izincwadi emabandleni futhi wabayala—lokhu kwabe kungumsebenzi wakhe. Ubuyena kwakumane kuyilobo bomphostoli osebenzayo, futhi wabe emane engumphostoli owayethunywe nguNkulunkulu; wabe engeyena umphrofethi, noma umbikezeli. Ngakho kuye, umsebenzi wakhe kanye nezimpilo zabazalwane kwakubaluleke kakhulu impela. Ngakho, wayengakwazi ukukhulumela uMoya oNgcwele. Amazwi akhe kwakungewona amazwi oMoya oNgcwele, kungasaphathwa ukuthi kuthiwe amazwi kaNkulunkulu, ngoba uPawulu wayemane engelutho ngaphandle kwesidalwa sikaNkulunkulu, futhi ngokuqinisekileyo wabe engeyena uNkulunkulu osenyameni. Ubuyena babungafani nalobo bukaJesu. Amazwi kaJesu kwabe kungamazwi kaMoya oNgcwele, kwakungamazwi kaNkulunkulu, ngoba ubuyena kwakunguKristu—indodana kaNkulunkulu. UPawulu wayengaba kanjani untanga Wakhe? Uma abantu bebona izincwadi noma amazwi kaPawulu njengamazwi oMoya oNgcwele, futhi bewakhonze njengoNkulunkulu, ngakho kungathiwa bemukela noma yini bakhohliseka kalula. Ukukusho ngesankahlu, akuve lokhu kuwukumthuka uNkulunkulu? Umuntu angakhulumela kanjani uNkulunkulu? Futhi abantu bangakhothama kanjani ngaphambi kwemibhalo yezincwadi zakhe namazwi awakhuluma ongathi ayeyincwadi engcwele, noma incwadi yasezulwini? Ingabe amazwi kaNkulunkulu ayengakhulunywa ngumuntu ngokunganaki? Wayengamkhulumela kanjani uNkulunkulu umuntu? Ngakho, wena uthini—kungenzeka yini ukuthi izincwadi azibhalela amabandla zazingcoliswe yimibono yakhe ngokwakhe? Zazingeke kanjani zingangcoliswa imibono yobuntu? Wabhalela izincwadi amabandla esusela kulokho ayedlule kukhona yena uqobo kanye nezinga lempilo yakhe. Isibonelo, uPawulu wabhalela izincwadi amabandla aseGalathiya ezazinombono othile, futhi uPetru wabhala enye, nokho eyayinombono ohlukile. Yiziphi ezazivela eMoyeni oNgcwele? Akekho ongasho ngokuqinisekile. Ngakho, kungathiwa kuphela zombili zazinomthwalo ngamabandla, kepha izincwadi zawo zibonisa izinga lawo, zibonisa ukuhlinzeka nokusekela kwazo abazalwane, kanye nomthwalo mayelana namabandla, futhi zibonisa umsebenzi womuntu; zazingezona ezoMoya oNgcwele ngokuphelele. Uma uthi izincwadi zakhe zingamazwi kaMoya oNgcwele, ngakho awunangqondo, futhi uyamhlambalaza uNkulunkulu! Izincwadi zikaPawulu kanye nezinye izincwadi zeTestamente Elisha zingalinganiswa nomlando walabo ababenegalelo elikhulu kwezikamoya kamuva nje. Zisezingeni elifanayo nezincwadi zikaWatchman Nee noma lokho uLawrence adlula kukho, njalo njalo. Ukuthi nje izincwadi zalabo bakamuva ababenegalelo elikhulu kwezikamoya, aziqoqelwanga eTestamenteni Elisha, kepha ingqikithi yala bantu iyafana: Babengabantu ababesetshenziswa uMoya oNgcwele ngesikhathi esithile, futhi babengeke bamele uNkulunkulu ngqo.
Okwedlule：Incwadini yeBhayibheli yesAmbulo kuthi, “Uma kukhona umuntu owenezela kulezi zinto, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupho ezilotshiwe kule ncwadi: Futhi uma umuntu esusa emazwini encwadi yalesi siprofetho, uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe encwadini yokuphila, nasemzini ongcwele, nakuzo izinto ezilotshiwe kule ncwadi” (IsAmbulo 22:18-19). Kuyini ukuhlobana phakathi komsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kanye neziprofetho zeNcwadi yesAmbulo? Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu ugcwalisa zonke iziprofetho zesAmbulo?